Japana : Ahoana ny fahitana ny Tranonkala Japoney (2) · Global Voices teny Malagasy
Japana : Ahoana ny fahitana ny Tranonkala Japoney (2)
Nandika (fr) i Jannie Lung
Voadika ny 29 Mey 2018 3:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Français, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jolay taona 2009 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manasongadina ny sasany amin'ireo adihevitra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy sy ny tontolon'ny Twitter ny Fizarana faharoa sy ny fizarana fahatelo amin'ity lahatsoratra ity taorian'ny antsafa nampiadihevitra “Mandiso fanantenana ny habaka Japoney”: Antsafa niarahana tamin’ Atoa Mochio Umeda”, nofintinina tao amin'ny Fizarana voalohany.
Fara faharatsiny, nanomboka resaka matotra momba ny fomba fahitana ny habaka Japoney sy ny fivoarany ny antsafa. Nandray anjara lehibe tamin'ny famolavolana ny fahitana izany ankehitriny i Mochio Umeda, tamin'ny alalan'ny fanokafana bilaogy momba ny zavatra malaza ao amin'ny habaka Anglisy tamin'ny taona 2003. Nihitatra tany amin'ny daholobe ny ambaindainy raha namoaka ny boky “Web Shinkaron” (”Teorian'ny Fivoaran'ny habaka) izy tamin'ny taona 2006. Nandray ny anjara asan'ny mpanabe sy evanjelisitry ny Web 2.0 ao Japana izy.
@tsuda nanoratra tao amin'ny Twitter:
Ny mpahain'ny habaka “Web Shinkaron”, raha amin'ny endrika “toro-làlana tsotra ho an'ny tranonkala” ho an'ny tanora izay nihalehibe tamin'ny aterineto, mampita ny hafatra hoe “Vakivakio ireo efa tafatoetra (establishment)!”
Amin'izany, ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra voalohany tamin'ny fanadihadiana dia fanehoan-kevitra mikasika an'i Mochio Umeda ihany, ka tafiditra ao anatin'izany ny famelezana azy manokana, izay miampanga azy ho tsy mahafantatra ny andraikitra apetraky ny lazany. Ohatra, naneho ireto hevitra ireto tao amin'ny bilaoginy ilay bilaogera Takayuki Fukatsu, rehefa avy nanipika fa tsy nahavita nanararaotra ny fahafahana hampiasa vola amin'ny tsena Amerikana ny orinasany, Hatena:
Hatramin'ny nahazoan'i Umeda ny satan'ny olona asandratra (ivavahana) amin'ny “Web Shinkaron”, voatery nanohy nanome fanomezana ho an'ny vahoaka sy hanaparitaka ny fahombiazany izy, raha tsy izany tsy hiasa intsony ny ‘fivavahana’. Izy no iray amin'ireo namelona ny afo sy nanomboka ny hetsika; noho izany, tokony hanatanteraka ny fahitany Atoa Umeda na Hatena, raha tsy izany, hiala aminy ny vahoaka ary hilaza hoe: “Leo ireo teny rehetra ireo aho.” Ny fahitan'ny rehetra fa “tsy mety intsony ao Japana ny tontolon'ny Web Shinkaron“, no fototr'io fahadisoam-panantenana io. Inona no tokony hataontsika? Nampiredareda ny afo rehetra izy ary avy eo nisotro ronono, saingy mbola sahy niantso ny tranonkalan'ny Japoney hoe “fahadisoam-panantenana”.
Araka ny efa nampoizin'i Mochio Umeda, nanome tsiny an'ny Hatena, [mpanome tolotra aterineto goavana ao Japana, tompon'ny sehatra fibilaoginy sy tranonkala aterineto fizarana sarimihetsika sy horonantsary] noho ny toetry ny tranonkala Japoney ankehitriny ny sasany, miaraka amin'ireo fanehoan-kevitra samihafa momba ny fahadisoam-panantenany. Nobu Ikeda, mpahay toekarena manindry fa tsy nahahoatra ny sehatr'ireo zana-bondrona ara-kolontsaina ny tranonkala.
Hatena no tompon'andraikitra voalohany amin'ity toe-javatra mampalahelo ity. Araka ny fanehoan-kevitr'Atoa Umeda fa “be dia be ireo fanehoan-kevitra adala,” ny fahitana fa betsaka kokoa ny famelezan'olona tsy nitonona anarana raha oharina amin'ny tsikera mahasoa lazain'ireo mahasahy mampiseho anarana no mampihataka ireo mpiandraikitra, ka izay no nampidina ny kalitaon'ny tranonkala Japoney avy eo. Vokatr'izany, lasa sehatra fifanakalozan-kevitra eo noho eo an'ireo mpiandraikitra nihoatra ny sisintanin'ny haino aman-jery misy amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny bilaogy amerikana. Mandritra izany, ny tontolon'ny blaogy Japoney, araka ny fitarainany, dia miharatsy hatrany.
Ny mampitotongana an'i Japana dia ny rafitra patriarka eo amin'ireo orinasa Japoney sy ny “karaman-dehilahy” izay tsy manohitra ny “statu-quo” fa manamaivana ny fahasorenan'izy ireo any amin'ny aterineto na amin'ny fisotroana toaka. Raha maka vahana, nanolotra toerana iray ny Hatena izay ahafahan'ireo osa mifaly sy milalao ny anjara asan'ny mpifoka rivotra artifisialy ho an'ity rafitra tsy alehany ity (izay ankahalain'i Atoa Umeda ihany koa). Ny olona amin'ny maha-olombelona azy dia tsy afaka manova io firafitra io, saingy mety ho an'Atoa Umeda, amin'ny maha-mpitarika ny Hatena ny mandray fanapahan-kevitra hanatsara ny toe-draharaha. Fandosirana andraikitra ny famintinana ny toe-javatra amin'ny teny hoe “mandiso fanantenana” kanefa tsy nanao ezaka, tahaka ny hoe olan'ny olon-kafa.
Bilaogera vitsivitsy no niezaka nampitaha ny tranonkalan'ny Anglisy tamin'ny tranonkala Japoney. Ilay mpanao gazety Nobuyuki Hayash, no miavaka indrindra, izay namoaka lahatsoratra mahafinaritra momba ny fahasamihafana eo amin'ny tranonkala roa mikasika ny fiparitahana, ny fifaninanana, ny tombontsoa sy ny fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina roa.
Navoakan'ilay bilaogera Adamu tao amin'ny bilaoginy Mutantfrog Travelogue, ny lahatsoratra “Inona no mitranga amin'ny tranonkala japoney – mandiso fanantenana sa mahavariana?, taorian'ny fifanakalozan-kafatra tao amin'ny Twitter nifanakalozan'i Marxy sy Chris Salzberg an'ny Global Voices. Misy adihevitra tsara ao amin'ny sehatra fametrahana fanehoan-kevitra, izay nampisy zava-baovao ho an'ny adihevitra ny fahasamihafan'ny fiteny.
Bilaogera Eiji Sakai, izay mibilaogy amin'ny teny Anglisy, Japoney, ary Vietnamianina, manontany antsika hoe firy amintsika no mahatakatra tsara ny tranonkala Anglisy mba hanome fanamarihana mahasoa momba ny fomba fijerin'Atoa Umeda. Manontany tena izy raha nisy fiantraikany tamin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo ny henatry ny Japoney manoloana an'i Etazonia sy ny Silicon Valley, ary manontany tena raha toa ka mahery setra ireny raha nonina tany Saigon i Umeda fa tsy tany Silicon Valley.
Bilaogera Michi Kaifu mieritreritra fa manamarina ny hatezeran'i Umeda ny fanehoan-kevitra tamin'ny antsafa. Mampitaha ny vinany amin'ny aterineto amin'ny endrika virtoalin'ny Sekolin'i Athène izy ary manome ny heviny:
Tsara fa miroborobo ny vondrona ambanin'ny tany sy ny e-varotra, raisina izy ireo, saingy voafetra ho an'ny “sangany manam-pahaizana” ny tontolon'ny “Sekolin'i Athena”. Ho an'ireo olona afaka mahita fialam-boly maivana hanokanana ny heriny manontolo amin'ny dingan'ny famoronana fahalalana izany, na dia tsy vidiana aza. Izany tontolo izany, raha tsy hita mihitsy, dia toa kely loatra sy malemy.
Amin'ny teny hafa, manakiana ireo sangany japoney i Umeda. Mandritra izany fotoana izany, tezitra amin'ireo “mpiserasera aterineto Japoney [izay] adala” izy, ary noho ny fialonana tsy misy dikany, mampietry ny vahoaka izay maniry mafy ny handray anjara amin'ny tontolon'ny sangany manam-pahaizana.
17 ora izayAzia Atsinanana
3 andro izayAzia Atsinanana